You don’t need to beat him! – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on2August 2010 27 December 2010 Categories Discussion, Parenting
6 thoughts on “You don’t need to beat him!”
Only illiterate parents beat small children.
Parents penalizing kids is fine, beating is
2 August 2010 at 7:34 pm
Penalizing kids is fine, beating is cruelty.
Parents and teachers beat children not
because of they love them and teach
them. But they are in fact pouring out
their resentment and anger towards kid.
A father who is no one at outside world
would come back home and act likeaking
in his home. A teacher who cannot get
a real job outside his chosen job will act
with cruelty to the children. Take the
example of the monk who had beaten
Maung Lwin (future king Ming Tone).
That old monk was just beating for his
dried salted fish. But he was bluffing as
if he did it for the young prince. I am a
practising Buddhist and I amaBuddhist
by faith and birth but I’ve never admired
that monk since I heard that story.
ကျနော့် comment ကြောင့် ဆရာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကျနော် ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ ကျနော့် comment အပေါ် ဝေဖန်မှုတွေရှိနေမယ်ဆိုတာလည်း ကျနော်သိပါတယ်။ သိရဲ့သားနဲ့ မင်းဘာလို့ရေးရတာလဲကွ….. လို့ မေးလာရင်…. ဟုတ်ကဲ့…. ကျနော့်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြစေချင်တာပါဆရာ…. ကျနော့်ရဲ့မိုက်မဲမှုတွေနဲ့ထပ်တူမဟုတ်တောင် ဆင်တူလေးတွေ ကျနော့်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတာလေးတွေကို ပြောပြချင်မိတာပါဆရာ…. မမိုက်ချင်ပဲ မိုက်မဲဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များပေါ့ဆရာ….. နောက်ပြီး…. ဆရာ့ရဲ့ post ကိုဖတ်ပြီး မပြင်နိုင်တဲ့ ကျနော့်အကျင့်ကိုလည်း ၀န်ခံချင်လို့ပါဆရာ…. လူ့အန္ဓပြောလည်း ခံရတော့မှာပဲ ဆရာရေ….. ကျနော့်ယောက္ခထီးကို သွားရိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဆရာရဲ့…. ဗလခြင်းမတူသလို…. ဇခြင်းလည်းမတူဘူးဗျ….. သူ့အကြောင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်….. ရဲထွက်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်…. လိမ်ညာမှုတွေကို လုပ်ဖူးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ထောင်ကျဖူးတယ်။ အရက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ သာမန်လူကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ……. ကျနော့်မိန်းမကိုတော့ ကျနော်ရိုက်ပါတယ်….. ဆုံးမပါတယ်….. ဒါပေမယ့် ဆရာ့စကားနဲ့ပြောရင် သူက ကျနော့်ထက်ဆိုးတဲ့ လူ့အန္ဓလို့ပြောရမလားမသိဘူးဗျ….. ကျနော် ဘယ်လောက်ပြောပြော ဘယ်လောက်ဆိုဆို…. ပြင်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့သူပါ….. သူနဲ့ကျနော်က ၁၁ နှစ်ကွာပါတယ်။ ဆယ်တန်းအထိပဲ ကျောင်းပညာသင်ဖူးတဲ့သူပါ…. စာဖတ်ဖို့ကို စိတ်မ၀င်စားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အခု သူ့အသက်က ၂၁ ပဲရှိပါသေးတယ်….. သူ့မိသားစုရဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေကို သိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော်သူ့ကို ဖျောင့်ဖျစည်းရုံးခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ စည်းရုံးမှု မအောင်မြင်ပါဘူး။….. ကျနော် သူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျကတည်းက တစ်အိုးတစ်အိမ် သပ်သပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ…. ဒါပေမယ့် သူ့အသက်ကငယ်တော့ သူ့အတွက်ကြည့်ပြီး သူ့မိဘတွေနဲ့ နီးတဲ့နေရာမှာ အိမ်ငှားပြီးနေခဲ့ပါတယ်။ ညားကာစကတည်းက သူ့ကို ကလေးမယူဖို့…. အလုပ်တစ်ခုရအောင်လုပ်ဖို့…. ကိုင်ပိုင်အိမ်လေးဖြစ်တဲ့အခါမှ ကလေးယူဖို့ ကျနော့်ရဲ့ plan တွေကို သူ့ကို ပြောဆို တိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်ရဲ့ စကားတွေက အရာမရောက်ခဲ့ပါဘူး….. အဲ့ဒီကတည်းက ဟာ… သွားပြီ ငါယူတဲ့မိန်းမက တော်တော်ခေါင်းကြောမာတဲ့မိန်းမပါလား? သူလုပ်ချင်တာ…. သူဖြစ်ချင်တာကို လုပ်တတ်တဲ့မိန်းမပါလားဆိုပြီး နောင်တလည်းရ စိတ်လည်းပျက်မိပါတယ်….. စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ပဲ ခရီးဆက်ခဲ့ရပါတယ်ဆရာ…. ဆရာ့စာထဲက အကြောင်းအရာတွေကို ဆရာသိအောင် ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်…. ကျနော်အခု သူ့မိဘတွေနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာကို ပြောင်းရွေ့ခဲ့ပါပြီ…. နှစ်လပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာ….အဲဒီ နှစ်လအတွင်းမှာပဲ ကျနော့်သားက တော်တော်လူရည်လည်လာပါတယ်။ ဟိုနေရာစပ်စပ် ဒီနေရာစပ်စပ် လုပ်ချင်ကိုင်ချင်လာပါတယ်။ ခက်တာက သူလုပ်ချင်တာတွေမလုပ်ဖြစ်အောင် မပြင်ဆင်ထားနိုင်တာကတော့ ကျနော့်ရဲ့အားနည်းချက်ပါပဲဆရာ…. ဆရာသုံးသပ်သလိုပဲ ကျနော်ဟာ မာနကြီးတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ…. ဆရာပြောသလို တစ်ဖက်သားကို ကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင် လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိမရှိပါဘူး…. ကျနော့်ရဲ့ ဗျူဟာက ဒီလူနဲ့အဆင်မပြေရင် ကပ်ကင်းကင်းနေမယ်…. ရှောင်ခွာမယ်ဆိုတဲ့ ဗျူဟာပါ…. ကျနော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အဲ့ဒီလိုပဲ ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့်ဗျူဟာ မမှန်ဘူးလို့သိလာတဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီနည်းနဲ့ ကျနော် အသားကျနေပါပြီ……. အခုလောလောဆယ်အထိ အဲ့ဒီနည်းအတိုင်းပဲ နေထိုင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ…… ရှောင်ရင်း ရှောင်ရင်းနဲ့ ဘယ်လောက်အထိရှောင်ဖို့စဉ်းစားမိလာသလဲဆိုတော့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အပြင်ဘက်ကို ထွက်ဖို့ပါ စဉ်းစားထားတဲ့သူဖြစ်နေပါပြီ….. ဒီလူမကောင်းဘူး…. ဟိုလူမကောင်းဘူး…. ဟာ…. ဒီလူလည်းမကောင်းဘူးပဲ…. ငါရောကောင်းရဲ့လား…. ဟာ…. တစ်ချက်တစ်ချက် ငါလည်းမကောင်းပါလား? တော်ပြီ…. လူတွေနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားတာပဲကောင်းတယ်….. အဲ့ဒီတော့ ဆရာပြောသလို….. သူ့ကို ရအောင် သိမ်းသွင်းမယ်ဆိုတဲ့ ဉာဉ်မျိုး ကျနော့်မှာ မရှိဘူးဗျ……. ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်မှာ ကျနော့်မိန်းမကိုတော့ ရများရမလားလို့ သိမ်းသွင်းရင်း (အင်တိုက်အားတိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူး) တစ်ဖက်ကလည်း ငါ ဝေးရာပြေးရမယ်ဆိုတာလည်းတွေးလျက်ပါပဲခင်ဗျာ…….
ကလေးအကြောင်းဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်….. ကျနော့်သားက အနည်းငယ်တော့ သိနေပါပြီ…. ဥပမာ.. ထမင်းစားမယ်လို့ မိဘတွေကပြင်ဆင်နေပြီဆိုရင် စားပွဲခုံကို မလာတာမျိုး (စားပွဲခုံက သေးသေးလေးမို့လို့ပါ) မနက် ကျနော့်အတွက် ထမင်းဗူး ထည့်နေပြီဆို…. သူ့ပန်းကန်ကို ယူလာပြီး သူ့အတွက်ထည့်ခိုင်းတာမျိုး….. ရေဆာရင်လည်း သောက်ရေဗူးကို လက်ညှိုးထိုးတတ်တာမျိုး…. သား ဘောလုံးရောဆိုရင် ဘောလုံးရှာတတ်တာမျိုး…. အဲ့ဒီလိုမျိုးအနည်းအကျဉ်းသိနေတော့ ဒီအချိန်ကတည်းက မဆုံးမထားရင် ဒီ့ထက်ကြီးလာရင် ဆုံးမလို့ရနိုင်ပါ့မလားလို့ ကျနော်တွေးမိပါတယ်။ သူ့အမေနဲ့ ကျနော်နဲ့ယှဉ်ရင် သူ့အမေအပေါ် တော်တော်အနိုင်ကျင့်ပါတယ်…. ဆံပင်တွေဆွဲစောင့်တယ်…. မျက်နှာကို ရိုက်တယ်….. ထိုင်နေတဲ့အချိန် အနောက်ဘက်ကနေ ဖက်ပြီး ကိုက်တယ်….. ပြီးတော့မှ ဥုံဖွဆိုပြီးလုပ်တယ်…. သူ့အမေအိပ်နေရင် သူ့အမေဗိုက်ပေါ် တက်ခုန်တယ်…. ကျနော့်အပေါ်တော့ အဲ့ဒါတွေ တစ်ခုမှ မလုပ်ပါဘူး…. မလုပ်ဖြစ်အောင် ခပ်တန်းတန်းနေပါတယ်…. ချော့မြူတယ်…. ပွေ့ဖက်တယ်…. ပါးကိုနမ်းပေးတယ်…… ဒါပေမယ့် အရမ်းကြီးအရောမ၀င်ပါဘူး…. ကျနော်ကြောက်နေမိတာက ကျနော့်သားက ၄ ဂဏန်းသမား…. စနေသားပါ…. ဒီအရွယ်ကတည်းက အညွှန့်မချိုးထားရင် အညွှန့်ကျိုးပါ့မလားလို့ စိတ်ထဲတွေးမိပါတယ်… (အသက်ကြီးတဲ့အထိ ဝေးရာမပြေးနိုင်ခဲ့ရင်ဆိုပြီး တွေးကြည့်တာပါ)
ကလေးအငိုမတိတ်တာ တိတ်အောင်ရိုက်ပြီးတိတ်ခိုင်းတာကလည်း အကျင့်လုပ်ပေးတာလို့ပဲပြောပါရစေဆရာ…. အခုပဲရိုက် အခုပဲပြန်ချော့တာမျိုးလုပ်ရင် ငိုကြောလည်းရှည်နေမှာစိုးလို့ပါ…. ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ငယ်ငယ်က ကျနော့်အဖေရဲ့အရိုက်ကိုခံရပြီးတဲ့အခါမှာ မငိုဖို့အတွက် ဖိအားပေးခြင်းခံရပါတယ်….. ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း စက်ဆုပ်ပါတယ်…. ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလိုမလုပ်ရင် တောက်လျှောက်ငိုနေရောပဲဆရာရေ…… ဘယ်လိုမှ ချော့လို့မရဘူး…. ချော့ရင် သူကတောင် စိတ်ကောက်သေးရဲ့…..
ယောက္ခထီးကြောင့် ကလေးကို ဖိမရိုက်တာတော့ သေချာပါတယ်။ သူ့ရှေ့မှာ ရိုက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ…. ကျနော်လိုချင်တဲ့ပုံစံကို သွတ်သွင်းဖို့အတွက်ရိုက်နှက်ရခြင်းပါပဲ…. ကျနော်လိုချင်တာက ကျနော့်ကို အရိုအသေမတန်တဲ့အပြုအမူတွေ မလုပ်ဖို့….. အိမ်ကပစ္စည်းတွေ မဆုံးရှုံးဖို့ မလိုအပ်ပဲ စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဖို့ပါပဲခင်ဗျာ……
ကျနော့်ရဲ့ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကြောင့် ဆရာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3 August 2010 at 12:15 am
I am very sad to read it. Normally, babies bite because they are teething!He colud give the baby teething toy or cold wash cloth (small towel ).
When my baby bites me I flicked her cheek with finger. I don’t have to do more than twice. She stoped biting me.
Babies are very curious at this age. They learn by touching thing because they couldn’t speak yet. The spices are not expensive items. I put spices in small plastic jars for baby to play.My baby eat by herself. She is learing motor skills. I let her tastes all the adult foods too. Please use small cup and fall small amount of water to help baby learn to drink fromacup. Even if he spill it would not damage the floor.
One and half year old doesn’t know how to control the emotions yet.He can use time out method after2yrs old.
When my baby cry I make eye ontact with her and ask her why or what she wants? I tell her that if she stop cerying I’ll give it to her or do it for her. I make sure she stop crying then give it to her what she wants and say “thank you”.
This way she learn that crying couldn’t always get what she wants. She could ask thing in nice way too.
I hope he read this and will help him in some way.
3 August 2010 at 12:33 am
O my god!beat to child is not solve problem,,
child just pain skin only,,OR child mental will weak..
You must readalot of books,,I think,U can ask Mr.Ata Kyaw,,which book,u should read and pls understand,,human esteem..
maung chit sayar says:
13 January 2012 at 3:25 am
quote: ” ကျနော်ကြောက်နေမိတာက ကျနော့်သားက ၄ ဂဏန်းသမား…. စနေသားပါ…. ဒီအရွယ်ကတည်းက အညွှန့်မချိုးထားရင် အညွှန့်ကျိုးပါ့မလားလို့ စိတ်ထဲတွေးမိပါတယ်… (အသက်ကြီးတဲ့အထိ ဝေးရာမပြေးနိုင်ခဲ့ရင်ဆိုပြီး တွေးကြည့်တာပါ)”
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ဆိုလျှင် ဒါမျိုးအတွေးတွေဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးဆိုတာ မသိခဲ့လျှင်လဲ အခုသိအောင် လုပ်ပါ။ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ကံ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်ပြီး ကိုယ်ကုသိုလ်ပြုလျှင် ကောင်းသောအကျိုးရမည် ၊ အကုသိုလ်ပြုလျှင် မကောင်းသော အကျိုးရပါမည်။ ၄ ဂဏန်းသမား စနေသား မို့လို့ ဆိုပြီး တလွဲအတွေးတွေနဲ့ ကလေးအပေါ် အညွန့်ချိုးခြင်းသည် အင်မတန် ရက်စက်ရာကျပါသည်။ ကလေး၏အနာဂတ်အတွက် သူလိုအပ်တဲ့ မေတ္တာတရား ဆင်ခြင်တုံအသိဥာဏ်တို့ကို အရွယ်နှင့်လိုက်ဖက်အောင်ပေးပြီး သူ့ဘ၀တွင် သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိအောင် မြေထောင်မြှောက်ပေး ကောင်းသောရည်မှန်းချက်များရရှိအောင် သွန်သင်ဆုံးမပေးလျှင် သားကောင်းရတနာ မလွှဲဧကန်ဖြစ်လာနိုင်ပါမည်။ မိဘအပေါ်တွင်သာ အများကြီးမူတည်ပါသည်။ သားသမီးမကောင်း မိဘ၀ခေါင်း ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင်းပေါ့။
ကိုယ်ချင်းစာတရားလေးလဲ ထားစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်တုန်းက အငိုတိတ်အောင် ကိုယ့်မိဘက ရိုက်ပြီးတိတ်ခိုင်းတာကို မကြိုက်ခဲ့လျှင် ကိုယ့်သားသမီးကိုလဲ ဒီလိုမလုပ်ပါနှင့်။ ဆက်လုပ်နေရင်တော့ ကိုယ့်ကလေးကြီးလာလျှင်လဲ ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပြီး ဒီသံသရာက မျိုးမပြုတ်မချင်းဆုံးတော့မှာမဟုတ်တဲ့ အဖြစ်မျိုး မဖြစ်အောင် ဒီသံသရာကို လူကြီးမင်းလက်ထက်တွင် ရပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ သားစဉ်မြေးဆက် ကောင်းစားလာပါလိမ့်မည်။ 🙂 မေတ္တာဖြင့်…
Previous Previous post: Parkway Health
Next Next post: Would you really want to mend your ways?